လုပ်ငန်းခွင်မှာ heavy workload တွေကို ထိရောက်စွာ စီမံခန့်ခွဲနည်း (Part- I) | Mycanvas
လုပ်ငန်းခွင်မှာ heavy workload တွေကို ထိရောက်စွာ စီမံခန့်ခွဲနည်း (Part- I)
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး အလုပ်များနေသော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံတွင် အလုပ်များစုပုံနေသည့်အချိန်များကို ဖြတ်သန်းပြီး ဘယ်တော့မှ မပြီးဆုံးနိုင်ဟု ထင်ရပါတယ်။
သင့်တွင် ဤမျှလေးလံသော အလုပ်တာဝန်ကို စတင်ရန်ပင် ကြောက်ရွံ့လွန်းသည်ဟု ခံစားရပေမည်။
သင်သည် ပရောဂျက်အချို့ သို့မဟုတ် အများအပြားကို ဟုတ်ကဲ့ဟု ပြောခဲ့ပြီး ယခု သင်မလုပ်ဆောင်နိုင်တော့မည်ကို သင်ကြောက်ရွံ့နေပါသည်။
အဲဒီအခါမှာ သင် နောက်ပြန်ဆုတ်ဖို့၊ အသက်ပြင်းပြင်းရှူပြီး ဘာအလုပ်ဖြစ်လဲ၊ ဘယ်အရာက မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို စတင်ကြည့်ရှုဖို့ လိုပါတယ်။
ဤသည်မှာ သင်၏ ကြီးမားသော အလုပ်ဝန်အောက်မှ ရုန်းထွက်ရန် သင်သုံးနိုင်သည့် နည်းဗျူဟာ 13 ခုဖြစ်သည်။
1. သင်လုံးဝ မလုပ်နိုင်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုပါ။
ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည် ကျွန်ုပ်တို့ အမှန်တကယ်လုပ်နိုင်သည်ထက် ပိုလုပ်နိုင်သည်ဟု ထင်မြင်ယူဆကြပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်များကို အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်စေသော အလုပ်တွင် ဖိအားများလွန်ကဲစွာမဖန်တီးမချင်း ပရောဂျက်များနှင့်တာဝန်များကို ပို၍ပို၍လုပ်ဆောင်ပါသည်။
စစ်မှန်သော၊ ထိရောက်သောတိုးတက်မှုကိုဖြစ်စေရန်၊ “ဒါက အလုပ်မဖြစ်ဘူး” ဟုပြောရန် သတ္တိနှင့် သတ္တိရှိရန်လိုသည်။ အားလုံးကို သင်မလုပ်နိုင်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုပါ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဖြေရှင်းနည်းများကို ရှာဖွေပါ။
သင့်ဘ၀တွင် မည်သည့်အချိန်၌မဆို အစီအစဉ်အတိုင်းဖြစ်မလာနိုင်သော အရာများစွာရှိပါတယ် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာရော၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရော ကိုယ့်အတွက်အဆင်မပြေတဲ့အရာတွေအတွက် သင်ကိုယ်တိုင်ရော သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုပါ ရိုးသားဖို့ ဆန္ဒရှိရပါမယ်။
2. သင်၏ထူးခြားသောကိုယ်ပိုင် အားသာချက်များကို အာရုံစိုက်ပါ။
သင်ဟာ စွန့်ဦးတီထွင်သူ ၊ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက် ၊ ဒါမှမဟုတ် အသင်းအဖွဲ့ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ အလုပ်လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်ဦးချင်းစီတိုင်းက ယူဆောင်လာနိုင်တဲ့ ထူးခြားတဲ့ အားသာချက်တွေ ရှိပါတယ်။
လူတွေက သူတို့ရဲ့ပန်းတိုင်တွေကို ရောက်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် ပရောဂျက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ပြုလုပ်သည့်အခါ သူတို့ရဲ့ မကျွမ်းကျင်သော နယ်ပယ်များကိုရွေးမိသည့်အခါ အလုပ်တာဝန်များ ပိခြင်းကို ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
၎င်းသည် စိတ်ပျက်အားငယ်မှု၊ လွှမ်းခြုံမှုနှင့် သင်မဖြတ်သန်းနိုင်သည့် လေးလံသော အလုပ်တာဝန်ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
3. သင့်အဖွဲ့သားများ၏ အားသာချက်များကို အသုံးပြုပါ။
သင့်လုပ်ငန်းတာဝန်ကို ထိထိရောက်ရောက် စီမံခန့်ခွဲရန် အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ သင်၏အားလပ်သောအချိန်များကို ပရောဂျက်တစ်ခုစီတွင် မြှုပ်နှံထားပြီး သင်၏ အမြင့်ဆုံးအဆင့် စွမ်းအင်၊ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် အားသာချက်များကို ယူဆောင်လာစေပါတယ်။
ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ သို့မဟုတ် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အဖွဲ့လိုက်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည်လည်း ဖြေရှင်းချက်တခုဖြစ်ပါတယ်။
လူတိုင်းမှာ ထူးခြားတဲ့ အားသာချက်တွေ ရှိပါတယ်။ ပရောဂျက်များကို ထိထိရောက်ရောက် ပြီးမြောက်နိုင်စေရန် သေချာစေရန် သီးခြားလုပ်ဆောင်ခြင်းထက် အဖွဲ့လိုက်လုပ်ဆောင်ခြင်းကို တွေးတောရန် အရေးကြီးပါသည်။
ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ယူမယ့်အစား ဖြစ်နိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံးရလဒ်တွေကို ပေးနိုင်အောင် ဘယ်သူတွေနဲ့ လက်တွဲလုပ်ဆောင်နိုင်လဲဆိုတာကို ကြည့်ပါ။
4. Planning အတွက် အချိန်ယူပါ။
ထိရောက်သော စီစဉ်မှုတစ်နာရီသည် အချိန်နာရီပေါင်းများစွာကို သက်သာစေနိုင်သည်။ ပရောဂျက်တွေကို အမြန် စလုပ်မယ့်အစား အရာအားလုံးကို ပုံဖော်ဖို့ အချိန်ယူပါ။
ပရောဂျက်၏ရည်ရွယ်ချက်၊ နောက်ဆုံးရက်၊ လိုချင်သောရလဒ်များ၊ KPIs နှင့် ဖြစ်နိုင်သောစိန်ခေါ်မှုများအကြောင်း စဉ်းစားရန် အချိန်ယူနိုင်ပါတယ်။
ပရောဂျက်အပေါ် လုံးဝရှင်းလင်းပြတ်သားစွာရှိခြင်း၊ ပရောဂျက်မှ ရရှိနိုင်ခြင်းနှင့် သင်လိုချင်သောရလဒ်သည် အချိန်များစွာကို သက်သာစေနိုင်သည်။ ၎င်းသည် သင့်အား ဦးစားပေးအစီအစဉ်များနှင့် အချိန်ဇယားများကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရရှိစေသောကြောင့် သင့်လေးလံသောအလုပ်အပေါ် အာရုံစိုက်ပြီး အာရုံစိုက်ရန် လိုအပ်သောအချိန်ပမာဏကို ပိတ်ဆို့နိုင်သည်။
သင့်ကိုယ်သင် Full Life Planner ကဲ့သို့သော အစီအစဉ်ဆွဲသူတစ်ဦးဖြစ်လာခြင်းသည် သင့်ကိုယ်သင် ကြိုတင်စီစဉ်ရန် ကူညီပေးမည်ဖြစ်ပြီး သင်၏နေ့စဉ်ဘဝကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် စီစဉ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် အစီအစဉ်ရေးဆွဲသူကို စစ်ဆေးပြီး သင့်ပရောဂျက်များနှင့် အလုပ်များကို ထိရောက်စွာ စီစဉ်ရန် စတင်ပါ။
5. ဦးစားပေးများကို အာရုံစိုက်ပါ။
အရာအားလုံးကို ဦးစားပေးမဟုတ်ပေမယ့် အရာအားလုံးက အချိန်ကုန်လွန်းတဲ့ အခိုက်အတန့်မှာ ရှိနေတယ်လို့ မကြာခဏ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
သင်၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် သင်၏အကြီးမားဆုံးဦးစားပေးများကိုအာရုံစိုက်ရန် သင်အသုံးပြုနိုင်သည့်ကိရိယာတစ်ခုမှာ Eisenhower Matrix ဖြစ်သည်။
အရေးအကြီးဆုံးအရာတွေကို အရေးယူဖို့ ဒီဗျူဟာက ရိုးရှင်းပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ချေ လေးခုအပေါ် အခြေခံ၍ သင်၏လုပ်ဆောင်ချက်များကို ခွဲခြားထားသည်။
– အရေးတကြီးနှင့် အရေးကြီးသည် (သင်ချက်ချင်းလုပ်ရမည့်အလုပ်များ)။
– အရေးကြီးသော်လည်း အရေးတကြီးမဟုတ်ပါ (နောက်မှလုပ်ရန်စီစဉ်ထားသောအလုပ်များ)။
– အရေးတကြီးဖြစ်သော်လည်း အရေးမကြီးပါ (သင်လွှဲအပ်ပေးမည့်တာဝန်များကို အခြားသူတစ်ဦးဦး)။
– အရေးတကြီး သို့မဟုတ် အရေးကြီးသည်မဟုတ်ပါ (သင်ဖယ်ရှားရမည့်အလုပ်များ)။
လေးလံသောအလုပ်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးသည် စိတ်ဖိစီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောကြောင့် အနားယူရန်နှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရန် အရေးကြီးပါတယ်။
သင့်စွမ်းအင်အဆင့်မြင့်ပြီး သင့်စိတ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်က လန်းဆန်းလာပြီး နိုးကြားလာပါက၊ သင်သည် လေးလံသောအလုပ်တာဝန်ကို ကိုင်တွယ်ရန် အထွတ်အထိပ်အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိနေပါသည်။ လမ်းလျှောက်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုခုလုပ်ဖို့ သင့်တစ်နေ့တာရဲ့အချိန်ကို ယူလိုက်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် စောစောထွက်သွားပြီး ခွန်အားအများကြီးပေးတဲ့လူတွေနဲ့ အချိန်ဖြုန်းလိုက်ပါ။
ညဘက်တွင် ကောင်းမွန်စွာ အိပ်စက်အနားယူရန်နှင့် စိတ်ကို ကြည်လင်စေရန်အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော အစာစားရန် အရေးကြီးပါသည်။